Two Myanmar Journals’ INSULT on ISLLAM and PROPHET MOHAMAD (pbuh) is not only an INSULT on Muslims of Myanmar but must be regarded as INSULT on ALL THE MUSLIMS AROUND THE WORLD | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၀င်ဆံ့အောင်
မွတ်စလင်မ်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အသေအကြေမဟာမိတ်ဖွဲ့လျက်ရှိ »
Two Myanmar Journals’ INSULT on ISLLAM and PROPHET MOHAMAD (pbuh) is not only an INSULT on Muslims of Myanmar but must be regarded as INSULT on ALL THE MUSLIMS AROUND THE WORLD
Two Myanmar Journals’ INSULT on ISLLAM and PROPHET MOHAMAD (pbuh) is not only an INSULT on Muslims of Myanmar but must be regarded as INSULT on ALL THE MUSLIMS AROUND THE WORLD.
If Buddhist Myanmar Government fail to arrest the writers and publishers, world MUSLIMS need to punish the Myanmar Government and all Myanmar Buddhists who fail to distance from those journals.
I hereby advice OIC not to just “spray sesame seeds into the mouth of the elephant” and delay the re-conciliatory or rehabilitation works which are anyway blocked by RACIST Myanmar, Bigot Rakhine government, most of the Buddhists and monks. Please try to stop further MASSACRE and GENOCIDE of Muslims of Myanmar including Rohingyas by pressuring USA, UN, ICC, EU and International community. Then only they all will learn the lesson and stop the Islamophobic Hate Speeches and Atrocities on all the Muslims of Myanmar.
Aung Tin အောင်ဇေယျတုကုို အပြစ်မတင်နဲ့
အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ အစုိုးရက အရေးမယူဘူး။
လူထုကုို ပညာပေးရမဲ့ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးငယ်တွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။
ကာယကံရှင် မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ကိုယ့်တာဝန် ကုိုယ်တာဝန်မကျေကြဘူး။
အစွန်းရောက် အောင်ဇေယျတုလို မီဒီယာမျိုး၊ ဦးဝီရသူလို ဖုန်းကြီးမျိုး၊ ကုိုနေမျိုးဝေလို လူစားမျိုးတွေ ဒီလုိုမုိုက်ရုိုင်း ယုတ်ကန်းနေကြတာက ဘာများ ထူးဆန်းနေလို့လဲ။
Theingi Zar ဘယ် သူများဘာသာအကြောင်း သမိုင်းကြောင်းကိုသေချာမသိဘဲ ဆော်ကားရိုင်းစိုင်းမှုတွေနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရေးသားဖော်ပြနေကြတယ် ကဘာကလေးစားပြီစံသက်မှတ်ထားတဲ့ငါတို့မွတ်ဟာမက်သခင်ကိုပေါက်ကရတွေစွပ်စွဲရေးသားနေတဲ့ခွေးသူတောင်းစားရေ ကြည့်လည်းလုပ်ပါသေချင်းဆိုးနေအုံးမယ် နကိုထဲကအယုံလွယ်သူများဘွဲ့ကိုရထားတဲ့မြန်မာတွေအလကားနေရင်း IS လက်စာမိတော့မယ် အခုနေတော့သွေးထိုးပြီးအစွန်းရောက်တွေဝင်လာတော့မှခွေးပြေးဝက်ပြေးပြီး ရှေ့ဆုံးကနေကိုယ်လွတ်ရုံးမဲ့သူယုတ်မာတွေ တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူ ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတွေ ဒီလိုအရေးမျိုးမရေးဘူး ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ပါ သက်ဆိုင်ရာအကြီးကဲတွေနဲ့အထောက်ထားခိုင်၂လုံစွာရှင်းလို့ရတယ် ဒီလိုမတရားမရေးကြပါနဲ့
ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်က ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာစော်ကားရေးသား
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား အစိုးရအသိအမှတ်ပြုမီဒီယာက စော်ကားရေးသားမှုကို အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဖွဲ့များ ဦးဆောင်ကာ ဂျာနယ်တုိုက်အား တရားစွဲဆုိုရေး မြန်မာမွတ်စလင်မ်များလိုလား
အောက်တုိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၄
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ် ၄၄ ပါ “အစွန်းရောက်ဝါဒနိဒါန်း” ဆောင်းပါးနှင့် “ဗုဒ္ဓ၏သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ဖျက်ဆီးခဲ့သော မိုဟာမက် ၏ အစ္စလာမ်မစ် မွတ်ဆလင်ကျူးကျော်စစ်များ” ဆောင်းပါး ၂ပုဒ်ပါအချက်အလက်မှားများသည် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ထုက ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့် မဟာတမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား ရုပ်ပိုင်း နမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုးသွမ်းယုတ်ညံ့ညစ်ထေးသူအဖြစ်ပုံဖေါ် ထားခြင်းသည် တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာရေးကိုအနှောက်အယှက်ပြုရုံသာမက မွတ်စလင်မ်ထု၏ နှလုံးသားကိုထိခိုက်နာကျင်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သဖြင့် အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဖွဲ့များဦးဆောင်ကာ သက်ဆုိုင်ရာဂျာနယ်ကို ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆုိုစေလိုကြောင်း အလွှာပေါင်းစုံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဘာသာအရ ဘုရားသခင်ပြီးရင် ကျွန်တော်တုို့အလေးစားဆုံး ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာ အချစ်ခင်ဆုံး ကျွန်တော်တုို့တမန်တော်မြတ်က ဒါကိုလုပ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တုို့ဟာ တသွေမသိမ်းလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တုို့တမန်တော်မြတ်ကိုစော်ကားတာဟာ ကျွန်တော်တုိုိ့ဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တုို့ဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတာသည် ကျွန်တော်တုို့အသည်းနှလုံးကိုစော်ကားတာပဲ။…. မြန်မာနိင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်မ်ထုကြီးကိုစော်ကားတာဟာ တုိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာမူကိုပျက်ပြားအောင်လုပ်တာပဲ ”ဟု ထင်ရှားသည့် အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ခလီဖွှာဦးသိန်းဝင်းအောင် က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
သူရိယ ဦးအောင်(မောရိသျှ)အမည်ဖြင့် ရေးသားသည့် အစွန်းရောက်ဝါဒနိဒါန်းဆောင်းပါးတွင် တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်(ဆွ)အား ဂုဏ်ဒြပ်နှင့်မညီမဆီလျှော်သည့် အသုံးအနှုန်းပေါင်းများစွာ(ဥပမာ။ “…ခတီဂျာနှင့် ညားခဲ့သည်”)ကိုသုံးနှုန်းထားသည့်အပြင် “မိုဟာမက်သည် မက္ကာမက အခြားဒေသများအားလည်း ဂျီဟတ်ပြုခဲ့သည်။ခရီးသွား ဂျူး၊ ခရစ်ယံ၊ ပါရှန်း၊ အီဂျစ် ကုန်သည်တို့ကိုဦးဆောင်တိုက်ခိုက် ဓားပြပြုခဲ့သည်” ပာုရေးသားကာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား “ဓားပြ” ဟုမဟုတ်မမှန်စော်ကားရေးသားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အထက်ပါဆောင်းပါးတွင်ပင် “အာရဗ်တို့သည်မိန်းမများစွာယူကြသည်။မိုဟာမက်က စည်းဖြင့် လေးယောက်သာယူခွင့်ပြုခဲ့သည်။သို့သော် သူကိုယ်တုိုင်ကမူအယောက် ၄၀ ယူခဲ့သည်။”ဟု တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား မိန်းမအယောက် ၄၀ ယူသူဟုလည်းမဟုတ်မမှန်ရေးသားခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြု ဂျာနယ်တစ်စောင်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ် ၄၄ စာမျက်နှာ ၄ ပါ အစွန်းရောက်ဝါဒနိဒါန်းဆောင်းပါးတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) အား စော်ကားရေးသားချက်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဆောင်းပါးနိဂုံးပုိုင်းတွင် “မိုဟာမက်ပေါ်လာခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကပ်ဆိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါးအစား ကပ်ကြီးလေးပါးဟု ဆုိုရတော့မည်”ဟူသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တုိုးချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖုိုးထားသည့် မဟာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)အား “ကပ်ဆိုး”တစ်ခုအဖြစ်စာရင်းသွင်းကာ စော်ကားရေးသားထားသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ယုတ်ညံ့သည့်မှားယွင်းရေးသားချက်များအားအစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အချက်အလက်မှန်ဖြင့်အစားထုိုးထုတ်ပြန်သင့်သကဲ့သို့ တရားဥပဒေကြောင်းအရလည်းတရားစွဲဆိုသင့်ကြောင်း ခလီဖွှာ ဦးသိန်းဝင်းအောင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
“ဒီလိုမျိုးအစ္စလာမ်သာသနာကိုစော်ကားတာ ၊တမန်တော်ကိုစော်ကားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေက နံပါတ် ၁ တာဝန်ရှိတဲ့ ဂျာနယ်တုိုက်ကို တရားရုံးမှာဦးတုိုက်လျှောက်ပြီးတော့ တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆိုရမယ်။နံပါတ် ၂ အစိုးရကို ဒီလိုမျိုးဘာသာတရားတစ်ရပ်ကို ဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးရမှာကို ပျက်ကွက်နေကြောင်းထောက်ပြရမယ်။အဲဒီလောက်တော့အန်ိမ့်ဆုံးလုပ်ပေးရမယ်”ပာု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ရက်မှ ဦးညီညီကလည်း အထက်ပါအတုိုင်းသုံးသပ်သည်။
အထက်ပါအောင်ဇေယျတုဂျာနယ် စာမျက်နှာ ၁၀ တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် အရှင်မုနိတ-ဓမ္မာစရိယ အမည်ဖြင့်ရေးသားထားသည့် “ဗုဒ္ဓ၏သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ဖျက်ဆီးခဲ့သော မိုဟာမက် ၏ အစ္စလာမ်မစ် မွတ်ဆလင်ကျူးကျော်စစ်များ” ဆောင်းပါးတွင်လည်း မိုဟာမက်ဆိုသူသည်……မဒီနာမြို့ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး တပည့်နောက်ပါး အင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့အခါ မက္ကာမြို့ ကိုစတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ထုိုမှတဆင့် တစ်စတစ်စဖြင့် အာရပ်ပြည်တစ်ဝန်းလုံးကို ဘာသာရေးကျူးကျော်စစ်ပြု သိမ်းပိုက်၍ အစ္စလာမ်မစ် သာသနာကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု အစ္စလာမ်ဘာသာကို တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က ကျူးကျော်စစ်များဆင်နွဲကာ ဓားမိုးသာသနာပြုခဲ့ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ဖေါ်ပြထားသည်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်နဲ့ သာကီသွေးဂျာနယ် နှစ်ခုလုံးကို နိင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေရော၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေပါ သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတာမှာ ဒီဂျာနယ်ရဲ့ဖေါ်ပြချက်တွေပာာ ဘာကိုသွားတွေ့ရသလဲဆိုရင် အဓိက Hate Speech ကိုဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုနိုမ်ချစော်ကားတဲ့အရေးအသား တွေကိုတွေ့နေရတယ်။
အခုဖေါ်ပြလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးပာာဆုိုရင်လဲ မြန်မာနိင်ငံမှာရှိတဲ့ နိင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတစ်ခုကိုစော်ကားလိုက်တာပဲ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြန်ပြောမယ်ဆုိုရင်လည်း လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဒီနိင်ငံရဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတစ်ခုအဖြစ် အစ္စလာမ်သာသနာကိုအသိအမှတ်ပြုထားပါလျှက် အခုလိုမျိုးရေးသားမှုတွေကို စာပေစိစစ်ရေးကသော်လည်းကောင်း သက်ဆုိုင်ရာကသော်လည်းကောင်း ဒီလိုမျိုးလစ်လျူရှု့နေမယ်ဆုိုရင် ဒါပာာအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်နိင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမပာုတ်ကြောင်း အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖုို့လိုအပ်သလို ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း …တရားစွဲသင့်တယ်ဆိုလုို့ရှိရင်တရားစွဲပါ။ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလုိုမျိုးဆက်လွတ်ထားမယ်ဆုိုရင် အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်လာနိင်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုမပာုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်”၂၀၀၇ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစည်သူမောင်က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံုံးက စဉ်ဆက်မပြတ်လေးချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား ဗုဒ္ဓသာသာနာပြုဂျာနယ် အောင်ဇေယျတုက စော်ကားရေးသားခြင်းသည် ဒေသတွင်းပြဿနာအဆင့်မှသည် နိင်ငံတကာပြဿနာအထိကူးစက်သွားနိင်ကြောင်းလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ရက်မှ ဦးညီညီကထောက်ပြသည်။
“ဒါ(အစ္စလာမ်ဘာသာ)ဟာကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်မြတ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ်ထုလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆော်ကားလာရင် တမန်တော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆော်ကားလာရင် ဒါပာာရီဂျင်နယ်(ဒေသတွင်း)ပြဿနာမပာုတ်တော့ဘူး။အင်တာနေရှင်နယ်(နိင်ငံတကာ)ပြဿနာဖြစ်သွားမယ်။အဲဒါကိုအစိုးရက သတိထားဖို့လိုတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့လိုတယ်။”ဟု ဦးညီညီက နိင်ငံတော်အနေဖြင့်တာဝန်ရှိပုံအကြောင်းကို ထောက်ပြဝေဖန်သည်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါရေးသားချက်များသည် မြန်မာနိင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့နိင်ငံများအကြားရန်တုိုက်ပေးသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းနိင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးကရှု့မြင်သည်။
“ဒီဂျာနယ်ပာာ လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာကို လှုံ့ဆော်နေတာပဲ။မြန်မာနိင်ငံကမွတ်စလင်မ်နဲ့တင် နိင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တာမပာုတ်ဘဲနဲ့ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်နဲ့ပါ မြန်မာန်ိင်ငံကိုရန်တုိုက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါ့ကြောင့်ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖုို့လုိုတယ်”ဟု နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးမောင်မောင်က သုံးသပ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုဂျာနယ် အောင်ဇေယျတုပါ ဆောင်ပါးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း ထိရောက်သောတရားစွဲမူများပြုလုပ်ပေးစေလုိုကြောင်း လည်း Myanmar Muslim Media မှဆက်သွယ်မေးမြန်းသူအားလုံးက တညီတညွတ်တည်းတောင်းဆိုထားသည်။
“အဖွဲ့ကြီးငါးဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ရံှု့ချကြောင်းစာထုတ်သင့်တယ်။အစ္စလာမ်ဆိုတာမနေ့တနေ့ကမှပေါ်လာတဲ့ဘာသာမပာုတ်ဘူး။အဲဒီ့ဘာသာကအထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ယောက်ကို သေးသေးသိမ်သိမ်ပြစ်ပြစ်ခါခါရေးတာကတော့ တရားဝင်စော်ကားလိုက်တာပဲ။ဖေ့စ်ဘုတ်မှာရေးနေတာတွေရှိပေမယ့် အခုပာာက အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဂျာနယ်မှာတရားဝင်ရေးပြီးစော်ကားတာကတော့အရမ်းလွန်တာပေါ့ဗျာ”ပာု မန္တလေးမြို့တွင်နေထုိုင်သည့် ကိုဝေယံမင်းက သူ၏အမြင်ကိုပြောသည်။
This entry was posted on October 20, 2014 at 1:41 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
8 Responses to “Two Myanmar Journals’ INSULT on ISLLAM and PROPHET MOHAMAD (pbuh) is not only an INSULT on Muslims of Myanmar but must be regarded as INSULT on ALL THE MUSLIMS AROUND THE WORLD”
October 20, 2014 at 2:01 pm | Reply
ကျွန်တော် ဥာဏ်မှီသလောက် လုပ်သင့်တာလေး အကြံပြုချင်ပါတယ်-
ပီပြင် တဲ့ ကန့်ကွက်စာတစောင်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားပြီး-
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ အာလင်မ် အပါး ၅၀လောက်စုစည်းပြီး မော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ စည်းကမ်း သေ၀ပ်စွာ ကန့်ကွက်ခြင်း တိုင်ကြားခြင်း အမှုဖွင့်ခြင်းများကို တောက်လျှောက်လုပ်သင့်ပါတယ်။
တယောက်တပေါက် မပြောကြဘဲ စပီကာအဖြစ်ရွေးချယ် ထားတဲ့သူကသာ ပြောသင့် ပြောထိုက်တဲ့စကားကို တိတိ ကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုပြီး ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များက အိနြေ္ဒရရ တင်းတင်းမာမာမျက်နှာပေးနဲ့ တိတ်ဆိပ်စွာဖြင့် မကျေနပ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နေသင့်ပါတယ်-
ပထမဦးစွာ စာနယ်ဇင်းကောင်စီကို သွားရောက်ကန့်ကွက်စကားပြော ကန့်ကွက်လွှာတင်သင့်ပါတယ်-
ဒုတိယ သာသနာရေးဦးစီးဌာနကို သွားရောက် ကန့်ကွက်/စာတင်လုပ်သင့်ပါတယ်-
တတိယ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကို သွားရောက် ကန့်ကွက်/စာတင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
စတုတ္ထ တရားရုံးကိုသွားရောက် အမှုဖွင့်သင့်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းကို စာတင်တာသက်သက်မလုပ်ဘဲ တာဝန်ရှိတဲ့ သူကို နှုတ်နဲ့လဲ ကန့်ကွက် တိုင်ကြားဖို့လိုပါတယ်-
ပြီးတာနဲ့ သူတို့ရေးသားချက်တွေကို ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ပြန်ဆို ပြီးတော့ တိုင်စာကန့်ကွက် အကြောင်းကြားစာတွေကို ကမ္ဘာ့ အစ္စလာမ်အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီးကို( အယ်လ်ကိုင်ဒါ-ဘိုကိုဟရမ် နှင့် အိုင်အက်စ်-မပါ) ပို့သင့်ပါတယ်။
ကုလသမ္မဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့လည်း တိုင်စာပို့သင့် ပါတယ်-
ဒါတွေအားလုံးကို လူသိရှင်ကြား ခိုင်ခိုင်မာမာ လုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ်-
အလ္လာဟ်အရှင့်ဘက်တော်မှ အရေးယူမှု ဖြစ်လာမှာပါ-
October 21, 2014 at 3:21 am | Reply
Bran Sai with Shining Light and 15 others
ကိုင်း … အောင်ဇေယျတု ဂျာနယ်ကို ဘယ်လို အရေးယူမှု
အပြစ်ပေးမှု လုပ်သင့်သလဲ … ၀ိုင်းဝန်း အကြံပေးကြပါ …
ဒါဟာ သာသနာတခုကို အဆုံးစွန် စော်ကားမိုက်ရိုင်းခြင်းပဲ
ဖြစ်တယ် …။ ဒီနိုင်ငံတရားဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ်တယ်။
အရေးရမယ့် ပုဒ်မနဲ့ ပြစ်ဒဏ် ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ
ဥပဒေတိုင်းမှာလည်း ပါတယ် … ပါတီ အသင်းအဖွဲ့ ဆိုင်ရာ
မှာလည်း ဥပဒေတွေ ရှိတယ် …။ ဒီတော့ …
၁။ အစိုးရ ဘက်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိကြောင်း
၂။ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ထိထိရောက်ရောက်
အရေးယူရမယ် ၊ ဟန့်တားပိတ်ပင်တားမြစ်ရမယ် ။
၃။ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးများက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း
သတင်းတွေ ထုတ်ပြန်ပေးရပါလိမ့်မယ် ။
၄။ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာသော ပြည်သူများကလည်း
ဒီကိစ္စအပေါ် အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြုကြရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ … ဒီနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို သွားနေတယ်လို့ ပြောလို့
ရေးပြတာ ဖြစ်တယ် ။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို မီးမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ် ။
ဒီနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆန်သော စိတ်ဓာတ်ကို
ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ကြီးများရဲ့ အတွင်းစိတ်
မှန်ကန်မှု ၊ ဖြောင့်မတ်လေးစားဖွယ်ကောင်းမှုကို သက်သေပြ
ခိုင်းလိုက်တာ ဖြစ်တယ် ။
ဒီ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ …
လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား တန်ဖိုးထားမှု ရှိမရှိ ၊
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်ခြင်း ရှိမရှိကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာ
You, Thuzar Mdy, Patrick Tan, Faw Chai and 105 others like this.
တိမ် တိုက် ဝီ ရ သူ တို့ ထုတ် တဲ့ ဂျာ နယ် မ လား..တို ဗျန်?
ပြီး ရင်..ဝါး လုံး ချီး သုတ် လုပ် ကြ အုံး မှာ လေ..ပြော ရင်..လွန် ကုန် တော့ မယ်.. ;(
Bran Sai ဘယ်သူထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်လေ … စာနယ်ဇင်း ကော ။ အစိုးရကော အကုန် ငါ ထည့်ရေးထားတယ် ။ ကဲ … ဘာလုပ်မလဲ စောင့်ကြည့်မယ် ။။။။ မဟုတ်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန် အဲဒီ ဂျာနယ် အထောက်အထားနဲ့ ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်မယ်။
8 hrs · Unlike · 29
တိမ် တိုက် အား လုံး က..မ သာ နဲ့ အ သု ဘ ဆို တာ..သိ ပြီး သား ပါ..တို ဗျန် ရာ..
ဆော် သာ ဆော်..ကျ နော်..တော် တော် စိတ် ကုန် နေ ပြီး…
Thuzar Mdy အဓိက အစိုး ရ မှာ တာဝန် ရှိတယ်
အနီးဆုံး အစိုးရ အဖွဲ့ ဆို
မန်းကဝန် ကြီး ချုပ် ဦးရဲမြင့်တို့လဲ တာဝန် အပြည့် ရှိတယ်
8 hrs · Unlike · 9
Bran Sai စိတ်ကုန်တာက တပိုင်းလေ … ဒီ သောက်အစိုးရ နဲ့ ဒီလိုမျိုးညစ်တွေရဲ့ စော်ကားမှုတွေကို လူများများသိအောင်တော့ လုပ်ရမယ် ။
8 hrs · Like · 12
စတီ ဗင် မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒီ အောင်ဇေယျတု … တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်တစ်ခုကိုမှ အကျိုးမပြုတဲ့ အောင်ဇေယျတု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲ၊ တိုင်းဖျက်ပြည်ဖျက်စရိုက်တွေကို ရိုက်သွင်းပေးနေတဲ့ အောင်ဇေယျတု။
မီဒီယာလောကကို ခွေးတိုးပေါက်က၀င်လာပြီး ခွေးလျှောက်လမ်းကနေ ခွေးသွားသွားနေတဲ့ အောင်ဇေယျတု ။
အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုတာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြုဘာသာကြီးတစ်ခု။ အဲဒီဘာသာကိုစော်ကားနေတာကို အရေးမယူပဲ ရပ်ကြည့်နေခြင်းက အလိုတူအလိုပါခြင်းပဲလို့ယူဆပါတယ်။
8 hrs · Like · 22
Bran Sai အဲ မေ့နေတာ Ko Ko Gyi … ဒေါက်တာရေ အကူအညီတောင်းပါတယ် … ကျနော်လည်း အဲလောက် မကျွမ်းဘူး ဗျ … လိုအပ်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးထားပါလား ခင်ဗျ … လိုရင်း တပိုဒ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
8 hrs · Unlike · 13
စတီ ဗင် အခုဟာက သမိုင်းကို စလိမ်တယ်။ ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရကို ကပြောင်းကပြန်လုပ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ နဗီတမန်တော်ကိုစော်ကားလာတယ်။ နောက်ဆုံးရင် ကိုးကွယ်ရာ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပါစော်ကားတော့မယ်။(စော်လည်းစော်ကားနေပါပြီ) တဖြေးဖြေးနဲ့ သွေးတိုးစမ်းလာတာပါ။ ဆက်ပြီးငြိမ်ခံနေရင် ဆက်ပြီးစော်ကားခံရတော့မယ်။ ကိုယ်တွေအတွက် အော်ပေးမယ့်အသံမရှိဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသံမထွက်ပဲ ဆက်ငြိမ်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ “ပေ” ဘ၀ကနေ “ခြေနင်းဘက်” ဖြစ်တော့မယ်
8 hrs · Like · 25
Thuzar Mdy တဖက်စောင်း နင်းတွေကများ နေပီ
မဆိုင်တာလေး ပြော အုံး မယ်…See More
8 hrs · Like · 8
Asharaf Asharaf ကိုBra Sai ရေ။ကျေးဇူးအတင် ခံဘို့ မ ရေးမှန်း
မိုး တိမ် အဖွဲ့ကြီး ၅ ဖွဲ့မှာ
Hundrick Kil လမ်းမလည်ခေါင်မှာ Vinyl ကိုင်ပြီး စော်ကားတဲ့ ကိစ္စတောင် အခုထိ အရေးမယူသေးတာဗျာ
5 hrs · Like · 8
Kyaw Myo Aung အုမရ်ထုတရပ်လုံးရဲ့ဖရာစ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြန်လည်ချေပဖို့
Tint Tint Mon အစိုးရဟာ တရားဝင်ရပ်တည်နေတဲ့ဘာသာတစ်ခုအပေါ်ဥပဒေမဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းများ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်နေတယ်
Aung Myint အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်း ဒါမှမဟုတ် အစ္စလာမ် လူထုမှ တိုင်တန်း အမှုဖွင့် တရားဆွဲ ဒါက ပထမဆုံးလုပ်ရမဲ့ ခြေလှမ်း ပါ အဲဒါ မှ အရေးယူ မပေးဘူးဆိုရင်တော့ နောက်တဆင့် တက်ရမယ်
Yoeyar Kyaw link လေး ပေးပါလားဗျ
Khin Maung Aye အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဥပဒေပညာရှင်များ ခံစားမှုမရှိတာနဲ့ ကိုယ်အတွက်ကျိုးမရှိတာကြောင့် ငြိမ်နေတာဖြစ်မယ်။
Shahida Bin အစွလမ်ထုတ၇က်နှင့်အဒိကမြန်မာနိင်ငံမှမူစလင်အားလုံးတာဝန်
Kyaw Tun ဒါဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးအဆင့်ထက် ကျော်နေပြီ ဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့ ယုံကြည်ရာကျမ်းစာ တမန်တော် ကိုပါ မိုက်ရိုင်းစော်ကားနေတာ ဟာ ပြဿနာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာပါ နည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်လုပ်မှာပါ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေသာမက ပြည်သူအားလုံး ကန့်ကွတ်ရမှာပါ အာဏာပြန်သိမ်းဖို့ နည်းမျိုးစုံသုံးလိမ့်မယ် နောက်ဆုံး ပြောရရင် စစ်တပ်ဆက်ရှိဘို့ အစွန်းရောက်တွေ တွေ လက်ယက်ခေါ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးစစ်ခွေးတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်လိမ့်မယ် သူတို့ပြည်သူတွေကို ချကျွေးမယ်
October 21, 2014 at 7:09 am | Reply
Maung Maung Skw added2new photos.
လူတချို့ မိုက်ရိုင်းစုတ်ပဲ့တာကို တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါတယ်-
ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေပါဆိုတဲ့ သင်္ဃာန်းဝတ်တွေအပါအ၀င် အုပ်စုလိုက် အသင်းအဖွဲ့လိုက် လူမျိုးအလိုက် ယုတ်မာကောက်ကျစ် မိုက်ရိုင်း စုတ်ပဲ့တာ
ဒီလို မိုက်ရိုင်းစုတ်ပဲ့နေတဲ့ ခွေးသားတွေကို
ဟန့်တားမဲ့လူ တယောက်မှ မတွေ့ရဘူး-
ငါတို့ သာသနာကို စော်ကားတယ်
ငါတို့ တရားကို စော်ကားတယ်
ငါတို့ ကိုးကွယ်ရာ အရှင်ကိုစော်ကားတယ်-
ငါတို့ကိုးကွယ်ရာ ထိခိုက်မှု ဘာမှမရှိဘူး
ငါတို့ ရင်ထဲ အသဲထဲက နာကျင်မှုတွေဘဲ မင်းတို့တွေ့ရမယ်
မင်းတို့ သာသနာ အဖတ်ဆယ်မရအောင် ပျက်စီးတော့မယ်
မင်းတို့လက်နဲ့-မင်းတို့နှုတ်လျှာနဲ့ မင်းတို့သာသနာ မင်းတို့ ဖာသာဖျက်နေကြတာဘဲလေ-
နေရာအနှံ့ သာသနာဖျက်တွေရောက်နေတဲ့ သက်သေခံတခု
ပဲနွယ်ကုန်း- ကျောက်ကြီးသွား ကားလမ်းဘေးက ခွေးအူသံ ဆိုင်းဘုဒ်တခု-
October 21, 2014 at 7:12 am | Reply
အခုလို မြန်မာနိုင်ငံထဲက အစိုးရကတရားဝင် ထုတ်ဝေခွင့်ပြုထားတဲ့ ဂျာနယ်တွေ စာစောင်တွေကနေ ကျွန်တော်တို့ ဦးချကိုးကွယ်ရာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို၎င်း- အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားချစ်မြတ်နိုး စံထားကြသည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား၎င်း-ကျွန်တော်တို့ဘ၀လမ်ညွှန် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို၎င်း- စော်ကားနည်းပေါင်းစုံနဲ့ လူမဆန်စွာစော်ကားနေတာကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့လဲ အသဲခိုက်အောင် နာကျည်းဒေါသထွက် လျက်ရှိကြပါတယ်-
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တုန့်ပြန်မှုတခုခု ကန့်ကွက်မှုတခုခု လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့သူများကို အနဲငယ်ရှင်းပြပါရစေ-
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ သူပေါ်လစီ သူ့မူဝါဒနဲ့သူ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံတခုပါ- သူ့နိုင်ငံအတွင်းက လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံတို့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သဟဇာတဖြစ်ဖို့အတွက် ထိပ်တန်းဦးစား ပေးတဲ့နိုင်ငံတခုပါ-
အစ္စလာမ်အများစုရှိတာမှန်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို အခြားနိုင်ငံ သားအစ္စလာမ်တွေအတွက် ဘာအခွင့်အရေးမှ ထူးထူးခြားခြားရရှိထားတာမဟုတ်ပါဘူး-
သူနိုင်ငံရဲ့ ကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ ကြောင့် မလေးနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင် တရားဝင်ဆန္ဒပြခွင့် တွေ ခွင့်ပြုပေးလေ့မရှိပါဘူး-
ဒီ့အရင်က ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ နောင်တော်ကြီးများဟာ အသဲအသန်ကြိုးစားပြီး နားလည်မှု နဲ့ လုပ်ခဲ့ကြရတာပါ-
ပြည်တွင်းက ဘာတုန့်ပြန်မှု ဘာလှုတ်ရှားမှုမှမရှိဘဲ အခြားနိုင်ငံမှာ ထူးချွန်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သဘာဝမကျပါဘူး-
အဲ့ဒီတော့ ပြည်တွင်းက အရင်စလုပ်ပါ-
ကန့်ကွက်ပွဲ ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့ ပြည်တွင်းမှာ အခြေအနေ မပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်-
မနေ့က ကျွန်တော်အကြံပြု တင်ပြခဲ့သလို-
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးကဦးဆောင်ပြီးတော့ အာလင်မ် သာသနာ့ပညာရှင် ၅၀လောက်စု-သတင်းမီဒီယာသမားတွေပါ တခါထဲ ဆော်သြေ ထားပြီး
ဌာနပေါင်းစုံမှာ နှုတ်နဲ့လဲ ကန့်ကွက်ပါ-စာတင်ပြီးတော့လဲ ကန့်ကွက်ပါ-
စည်းကမ်းတကျ သေသေ၀ပ်ဝပ်နဲ့ မာမာတင်းတင်း ကန့်ကွက် ကြပါ- စိတ်ဆန္ဒနောက် လိုက်ပြီး ရန်စကားမပြောပါနဲ့-
သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း တရားရုံးတွေမှာ အမှုဖွင့်ပါ-
နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တရားဝင် တိုင်ကြားစာပို့ပါ-
မူရင်းဂျာနယ်နဲ့ ဘာသာပြန်ထားတာ ပါပါ့စေ-
ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားကိုလဲ တစောင်ပို့ပေးပါ-
မလေးနဲ့ အင်ဒိုက အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ အလုပ် လုပ်လာအောင် သူတို့အစိုးရအပေါ် ဖိအားတွေပေးလာအောင် အလုပ် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်-
ပထမဦးဆုံး ပြည်တွင်းက ကန့်ကွက်မှု အရင်စရပါလိမ့်မယ်-
ဟိုလူခေါင်းမဆောင်လို့ ဒီအဖွဲ့ခေါင်းမဆောင်လို့ ဆိုပြီး
အီမာန်ရှင် အသိတရားရှိတဲ့သူ ခေါင်းဆောင်ပါဘဲ-
October 21, 2014 at 7:48 am | Reply
Robert Sanshar အရေးယူတာ မယူတာက အာဏာပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာအပိုင်းလို့မြင်ပါတယ်။ကိုယ်တွေဘက်ကို စော်ကားလာသမျှတွေကို တရားဆွဲဖို့နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့က ကျနော်တို့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တို့ဘက် တရားစွဲလို ဆန္ဒထတ်ြဖော်လို့မှ သူတို့ဘက်က အရေးမယူဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ သူတို့ဘက်က foul တစ်ခုကျနော်ရထားပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုမှအကျိုးယုတ်လာစရာမရှိပါဘူး။ပြောသင့်တာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အောင်ဇေယျတုကရေးတာကိုငြိမ်မခံတော့ဘူးစော်ကားတာများပီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီနိင်ငံကတန်သလားနိင်ငံကိုအလုံးစုံးပျက်စီးရေးကိုဦးတည်နေသလားလူများစုဆိုပီပြောချင်တာပြောရေးချင်တာရေးကိုလက်ခံနေကြတာလားအခြားဘာသာတရားယုံကြည်မှုကိုလွတ်လပ်စွာစော်ကားတာကိုငြိမ်ပီကြည့်နေမှာလားဒီလိုစော်ကားတာကိုလက်ခံနေတာလားအစိုးရတင်မက လူများစုကိုးကွယ်သူတွေကငြိမ်ချမ်းရေးဒီမိုကရေစီအရေးလုပ်နေသူတွေမေတ္တာတရားရှင်တွေနဲနဲတော့ဖြေကြပါလားလုပ်သင့်ရေးသင့်တယ်လို့ယူဆသူတွေအဖြစ်ခံမှာလားငါတို့ကိုတော့မရေးနဲ့မပြောနဲ့သူတွေဒီတိုင်းကြည့်နေမှာလား ဒီမိုကရေစီနဲ့ဘာသာရေးကဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲ ဆရာကြီးများရှင်းပြပါ
ယနေ့ အစ္စလာမ် ဘာသာ သာသနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာပြည်မှာ ကျ နော်တို့၏ ကိုးကွယ်ရာအရှင် အလ္လာ
ဟု အရှင်မြတ်နှင့် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖြစ်သူ နှစ်ဘ၀
သခင် ကျေးဇူးရှင် တမန်တော်မြတ် ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်း
ဟိဝစလ္လမ် ကို စော်ကားသလောက် မည်သည့်နိူင်ငံ
မည်သည့်ဒေသ မှ အခုလောက်အထိ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
လူသိရှင်ကြား စော်ကားတာ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ရှိခဲ့ရင် တောင်မှ စော်ကားတဲ့ကောင် နေစရာ နေရာ ရှိမှာ
ယနေ့ ဘာကြောင့် မြန်မာမှာ ဒီလောက်အထိ စော်ကား
ဝန့် တာလဲ ???
ဘယ်သူတွေမှာ အဓိက တာဝန် ရှိသလဲ ???
မိမိကိုယ်ကို တာဝန်ခံ လို့ ပြောနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ
ဘာလုပ် နေကြသလဲ ???
အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီး၏ ခေါင်းဆောင် လူကြီးဆိုသူများ၏
စိတ်အတွင်းထဲမှာ အလ္လာဟ်ချ စ်စိတ် ၊ရစူလ်ကိုချ စ်စိတ်၊
နာကျ ဉ် ခံစားမှု မရှိကြတော့ဘူးလား ???
ကျူပ်ကတော့ ခံစားနေရတယ် ၊နာကျဉ်နေတယ်၊ မခံမရပ်
ဖြစ်နေတယ်၊ဒါပေမဲ့ ကျူ ပ်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့
ခံစားရတယ်။ အဲဒိ တာဝန် ပျက်ကွက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက လူကြီး
လူဟောင်တွေ ကေယာမသ်နေ့မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်
က ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းမေးရင် အဖွဲ့အစည်းက
လူကြီး များ ဘယ်လိုဖြေမလဲ ????
October 21, 2014 at 7:50 am | Reply
Jaadoo Khan Myo Zaw
ဒီ post ကို share ပြီးသော သူများရော
post အောက်မှာ မန့် သော သူများ နဲ့ ခုမှဖတ်မည့် သူများ အားလုံး အားလုံး သေချာ
စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ” ကျွန်တော့ အမြင်လေးပါ.
ခု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေ အနေဟာ အားလုံး
သိသလို ပဲ ၂၀၁၅ အပြောင်းအလဲ အတွက်
မီးကုန် ယမ်းကုန် အပက်တကုတ် နဲ့ အာဏာ
ဆက်လက် တည်မြဲဖို့ယုတ်မာမှုအပေါင်း သရဖူ
ဆောင်းနေ ချိန် , ခုအသည်းအသန် ကြံနေတာ
က အလ်ကိုင်ဒါ , ဟိဇ်ဘွလ္လာဟ် , isis စသည့်
နာမည် များအသုံးချကာ ဖြင့် နိုင်ငံတွင်း ဆူပူ ,
အုံကြွ , အဋိကရုံး ကြီးမား မြောက်များစွာ ဖန်တီး
ရန် ကြံရွယ်နေချိန် ” ခု အဖြစ်အပျက်ကလည်း
အစိုးရ စနက် ကလွဲလို့တခြား ဘာအကြောင်းပြချက်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး ဆို
တွေးစရာတောင် မလို ပါဘူး ”
* # * ဒီလို သတင်းဆောင်းပါးတွေ ကို အသုံးချပြီး
ဗုံးထောင် , ဗုံးဖေါက် , ပြီးလျှင် ကျွန်တော်တို့ 
အစ္စလာမ်တွေကို ပဲ တရားခံ အဖြစ် မတရားစွပ်စွဲ
တစ်စ တစ်စ နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအမှီ အပြင်းစား
ဆူပူ စေပြီး နိုင်ငံတွင်း စစ်အာဏာ ပြန်သိမ်းသွား
နိုင်ပါကြောင်း ,, * # *
ဒီအမြင်လေး ဆွေးနွေး ဖလှယ် ပေးရင်း
ကျွန်တော် တို့ရင်ထဲ က နာကျည်းချက် အပြင်း
စားတွေ ကို ဖွင့်ထုတ်ရာမှာ ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ်
ကြိုး ကွင်းပြန်မစွပ် မိစေရန် ထိန်းသိမ်းစေလို
ကြောင်း အကြံပြု မေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါတယ်
** အမှား ပါရင် ပြင်ပေးစေလိုပါတယ် **
October 21, 2014 at 8:49 am | Reply
Steven Seeker f
တမန်တော်မြတ်ကြီး(peace be upon him)